हाइड्रोपावरका शेयरधनीलाई खोजी-खोजी ‘ज्वाइँ’ बनाउने ऊर्जामन्त्रीको योजना कता हराए ? - Aarthiknews
हाइड्रोपावरका शेयरधनीलाई खोजी-खोजी ‘ज्वाइँ’ बनाउने ऊर्जामन्त्रीको योजना कता हराए ?
काठमाडौं । एकताका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन निकै चर्चामा थिए । मन्त्री पदको सपथ लिएलगतै उनले बोलेका कुरालाई लिएर सर्वसाधारणमा एउटा तरङ नै फैलिएको थियो । ‘पहिला–पहिला जनकपुर चुरोट कारखाना र नागरिक उड्डयनका कर्मचारीलाई खोजी–खोजी ज्वाइँं बनाउने गरिन्थ्यो,’ मन्त्री पदको सपथ लिएलगत्तै मन्त्रालयमा कर्मचारीले गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भनेका थिए–‘अब हाइड्रोपावरमा शेयर भएका युवालाई ज्वाइँ बनाउन हानथाप हुने वातावरण बनाउने छु ।’
निकै उत्साहित पारमा २०७४ साल चैत २ गते उनले उक्त कुरा बोलेका थिए । उनको त्यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएलगतै जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य पनि बढेको थियो । लगानीकर्तामा आशाका किरण देखिएका थिए । तर, उनका कुरा र अहिले शेयर बजारमा भएको यथार्थबीच निकै खाडल देखिएको छ । के अहिले हाइड्रो पावरमा शेयर भएका युवालाई ज्वाइँ बनाउन हानथाप बनाउने अवस्था छ ? आम नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् । विगतमा जलविद्युत् कम्पनीको शेयर जारी गरेका कम्पनीको शेयर किनेका सर्वसाधारण लगानीकर्तामा रुने कि हाँस्ने भन्ने अवस्थामा छन् ।
अहिले पनि जलविद्युत् कम्पनीको शेयर खरिद गर्नका लागि उनीहरुमा कुनै उत्साह देखिएको छैनन् । कुनै बेला ११ सय अंक नजिक ओर्र्लिएको पुँजी बजार मापक नेप्से अहिले १२५० अंकभन्दा माथि पुग्दा पनि जलविद्युत् कम्पनीको शेयर किन्न कोही इच्छुक छैनन् । यसैबाट पनि देखिन्छ कि ऊर्जामन्त्रीको त्यस्तो भनाइ र गराइमा कति फरक छ । उनले खोजी–खोजी ज्वाइँ बनाउने स्थिति बनाउँछु भनेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ । लगानीकर्ता उत्साहित हुँदै जानुपर्ने हो तर, अहिलेसम्म पनि जलविद्युत् कम्पनीको शेयर किन्नेहरुमा भने उत्साहित बन्न सकेका छैनन् ।
कुनै समय जलविद्युत् कम्पनीको शेयर किन्न झुम्मिनेहरु अहिले भन्–झनै नाक खुम्चाउँदै गएका बेला आएको छ । विगतका वर्षलाई हेर्ने हो भने केही सीमित व्यक्तिले मात्र जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स झोलामा हाल्ने र बिक्री गर्ने त्यसबाट आएको मोटो रकमले मोटाउँदै जाने गरेका थिए । त्यसपछि आयोजना निर्माण गर्ने संस्थापक मोटाउने र सर्वसाधारण दुब्लाउने दिनको शुरुवात भएको थियो । अहिले पनि अनुगमनको अभावमा संस्थापक मोटाउँदै जाने र सर्वसाधारण दिन प्रतिदिन दुब्लाउँदै जाने स्थिति छ । सर्वसाधारण नागरिक जलविद्युत् कम्पनीकोे शेयर खरिद गर्र्ने लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुँदै आएका छन् ।
सर्वसाधारणलाई जलविद्युत्को शेयरप्रति आर्कषित गर्न ऊर्जामन्त्रीको खोजी–खोजी ज्वाइँ बनाउने भनाइले पनि सकेको छैन । जलविद्युत् कम्पनीको शेयरप्रति नकारात्मक घारणा बनाएका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनुपर्ने गरी एउटा पनि काम हुन सकेको छैन । अहिले पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीमध्ये अधिकांशको शेयर मूल्य आधारभूत मूल्यभन्दा कम अर्थात १०० रुपैयाँभन्दा कम छ । नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनी मध्ये धेरैजसो हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर आधारभूत मूल्यभन्दा कम भएपछि त्यसले लगानीकर्तामा उत्साह जगाउन सकेको छैन ।
धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) किन्दा एक सय रुपैयाँ तिरेका लगानीकर्तको शेयरमूल्य त्यो भन्दा तल पुगेको छ । बैंकको ब्याज त के कुरा साँवा पनि गुमाउन पुगेका छन् । आंैलामा गन्न सकिने चिलिमे, सानिमा र अपर तामाकोसीको मात्र शेयर मूल्य २०० रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसले सबै जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन् । ऊर्जामन्त्री पुनले व्यक्त गरेका भनाइ र काम गराइप्रति मेल खान सकेको छैन । उनी ‘हाइड्रोपावरमा शेयर भएका युवालाई खोजीखोजी ज्वाइँ’ बनाउने योजना साकार पार्ने कामतिर लाग्नुपर्छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता मन्त्री पुनले बोलेको कुरा कार्यान्वन हुने कुरामा आशावादी छन् ।